Indawo yam ikwi-Old Quarter eToledo.
Ndingumqeshi onamava kwaye le yindlu yam yesibini. Jonga enye.
Ndizamile ukwenza indawo ekhululekile kakhulu, apho ungaphumla kuhambo lwakho olude esixekweni.
Ukubanakho ukupaka kwindawo yokupaka ekufutshane neorenji elawulwa nguwonke-wonke esitratweni.
Indlu ineemitha ezingama-85, kunye nesaluni enkulu kakhulu (iimitha ezingama-25), kunye namagumbi amabini okulala.
Sizamile ukucinga ngayo yonke into onokuyisebenzisa okanye oyidingayo, ngokusekelwe kumava ethu.
Indlu yintsha kraca, ihlaziywe ngokupheleleyo.
Kufuphi kakhulu kwiMyuziyam yaseGreco (imizuzu emi-3 uhamba), kunye neJardines del Transito (imizuzu eyi-3 uhamba).
Isitalato sithule kakhulu, sisikwere esincinci, sinokufikelela okuhle kakhulu ngemoto (ezinye iindawo kwi-Old Quarter ayifikeleleki).
Ifulethi kumgangatho we-1 (kungekhona kwinqanaba lokungena), kodwa isakhiwo sine-elevator (into enqabileyo kwi-Old Quarter).
Sibonelela ngayo yonke into esicinga ukuba ungayidinga, kodwa sixelele ukuba kukho into oyiphosayo.
4.98 · Izimvo eziyi-235
Yindawo ethule kakhulu, indawo yaseCurtidores endala, emva kweCortes de Castilla la Mancha, imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka kwiMyuziyam yaseGreco, iMyuziyam yaseSefardi, kunye nemizuzu emi-3 ukusuka ePaseo del Transito, ipaki enkulu.
Kukho ivenkile enkulu ekwimitha ezili-15 ukusuka emnyango, kunye nevenkile yokubhaka (ichurros ngeeCawe).
Singabaqeshi abanamava (malunga neminyaka emi-6), kwaye siyafumaneka kwimibuzo yakho, ungathandabuzi ukusibuza. Besineemeko ezininzi kule minyaka, ke ungakhathazeki nganto. Sinokuthetha isiNgesi ngokutyibilikayo, ungakhathazeki ngaloo nto.
Inombolo yomthetho: Vivienda Turistica JCCM 45012320180